IINKCUKACHA ZESHUMI KUFUNEKA WAZI-KWABAQALISI BOKUXOKA BOKUQALA
Umgangatho ophezulu we-mink lashes: 100% yokwenene u-mink uboya obunenkohlakalo ngokupheleleyo kwimveliso yasimahla. Ubude beelokhwe zethu ze-JM-LSH-S Series zivela kwi-0.8-15mm yebhanti yomqhaphu ethambileyo: Ibhendi yomqhaphu ephezulu ithambile ingama-28-30mm ubude be-mink eyelashes yethu yokwenyani ye-3D ithambile ...
Coca iinkophe zobuxoki ngokusebenzisa isikhongozeli seplastiki!
Isampulu yokubonisa i-FAQ Q. 1: Ngaba ndingafumana iisampulu zamehlo? A: Ewe, uku-odolwa kwesampulu kuyafumaneka kuvavanyo olusemgangathweni kunye novavanyo lweemarike. Kodwa kuya kufuneka uhlawule ...
Soloko ugcina imivimbo yakho ye-faux icocekile kwaye ugcine elona xesha lide! Kutheni le nto kufuneka sicoce ii-Eyelashes zethu zobuxoki? I-eyelashes yobuxoki ngamanye amaxesha inokuba nexabiso elininzi, kungoko unokufuna ukukwazi ukuyisebenzisa ngaphezulu kwesinye. Ngokubhekisele kwii-Eyelashes zethu zobuxoki zeFelvik, zihlala zikwazi ukusebenzisa ukuya kumaxesha angama-20-25 ukuba une ...
Wamkelekile kuFelvik-Indawo yakho yokuNika indawo yokuThengisa iimveliso ze-Eyelash!
UFelvik yinkampani yobuhle egxile kwii-eyelashes ezingezizo, ulwandiso lwe-eyelash kunye neemveliso ezinxulumene noko ngenjongo yokwenza ishishini lakho libe lula ngakumbi kwaye umthengi wakho ujongeka kwaye azive engcono. UFelvik uyavuya xa ulapha! Nokuba ujonge inkohliso / ubuxoki ...
Yintoni iMink ​​Lashes?
Zininzi iintlobo zeenkophe ezingeyonyani kwintengiso: Mink Lashes, Faux Eyelashes, Faux Mink Lashes, Synthetic Eyelashes, Human Hair Lashes, Horse Hair Lashes, Silk Lashes njalo njalo. Inokudideka kakhulu xa uzama ukunciphisa umda kwiiyantlukwano kunye ...
Ungasifaka njani isicelo kunye noKhathalelo lweeEyilehes ezingezizo?
Indlela yokufaka isicelo? Inyathelo 1. Linganisa ubude bebhanti ye-lash ngokuyibeka ngobunono kwinkophe yakho kwaye usike ukugqitha kwinxalenye engaphandle. Ukuba zinde kakhulu, ziya kwenza ukubonakala kwejwabu leso, ngenxa yoko nceda uqiniseke ukuba ubude bakho bufezekile kwaye bukhululekile ...
I-Felvik Silk Eyelashes
Yintoni isilikhi eyelashes? Ngokusisiseko, i-Silk Lashes kunye ne-Mink Lashes zenziwe ngezinto ezifanayo, zombini zenziwe nge-PBT. Umahluko ophambili phakathi kwabo awukho kwimathiriyeli yabo, kodwa kubume babo, ukugqiba kwabo kunye nobunzima babo. Imivumbo yesilika ine-taper ende, oko kukuthi, i-ma ...